व्यक्ति’को मृ’त्यु भएपछि वास्तवमा के हुन्छ ? – Patrika Nepal
व्यक्ति’को मृ’त्यु भएपछि वास्तवमा के हुन्छ ?
मंग्सिर १६, २०७८ बिहिबार 53
योगमा, हामी शरीरलाई पाँचवटा आवरण वा पत्रहरूमा हेर्दछौँ । भौतिक शरीरलाई अन्नमयकोष भनिन्छ । अन्न अर्थात् भोजन, त्यसैले यो भोजनबाट बनेको शरीर हो । दोस्रो पत्रलाई मनोमयकोष वा मानसिक शरीर भनिन्छ । तेस्रो पत्रलाई प्राणमयकोष भनिन्छ, जसको अर्थ हो ऊर्जा-शरीर । भौतिक, मानसिक र ऊर्जा शरीर जीवनको भौतिक आयामहरूसँग सम्बन्धित हुन्छन् । उदाहरणको लागि, तपाईंले यो प्रस्ट देख्न सक्नुहुन्छ कि बिजुली बल्ब भौतिक हो । विद्युत अर्थात् तारहरूको माध्यमले बहने विद्युतकणहरू पनि भौतिक हुन् ।
साथै, त्यो बल्बबाट निस्किने प्रकाश पनि भौतिक हो । यी तीनवटै भौतिक हुन् । त्यसैगरी, भौतिक शरीर स्थूल हुन्छ, मानसिक शरीर केही सूक्ष्म हुन्छ, अनि ऊर्जा (प्राण) शरीर अझ बढी सूक्ष्म हुन्छ । तर, यी सबै भौतिक प्रकृतिका हुन्छन् । व्यक्तिको शरीर, मन र ऊर्जामा कर्मको छाप हुन्छ । कर्मको छाप वा कर्मको संरचनाले नै तपाईंलाई भौतिक शरीरमा अड्याइरहेको हुन्छ । भलै, कर्म बन्धन भए तापनि, कर्मको तत्त्वको कारणले नै तपाईं शरीरमा रहिरहन सक्नुभएको छ, अनि जीवित हुनुहुन्छ ।
बाँकी दुईवटा आयामहरूलाई विज्ञानमयकोष र आनन्दमयकोष भनिन्छ । विज्ञानमयकोष अभौतिक हुन्छ, यद्यपि भौतिकसँग सम्बन्धित हुन्छ । विज्ञान वा विशेष-ज्ञान भनेको असाधारण ज्ञान हो, अर्थात् इन्द्रियहरूले बोध गर्ने भन्दा परको ज्ञान । यो आकाशीय शरीर हो । यो अनित्य (क्षणभङ्गुर) हुन्छ—भौतिकबाट अभौतिकतर्फ जाने अवस्था । यो न भौतिक हो, न त अभौतिक । यो दुवैबीच रहेको सँघार जस्तै हो । आनन्दमयकोष भनेको आनन्द-शरीर हो, जुन पूर्णतया अभौतिक हुन्छ । यसको आफ्नै स्वरूप हुँदैन । यदि भौतिक, मानसिक र ऊर्जा शरीर सही स्वरूपमा रहे भनेमात्र आनन्दमय शरीरलाई थाम्न सकिन्छ । यदि यी रहेनन् भने, आनन्द-शरीर सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको अंश बन्नेछ ।जब कसैको मृत्यु हुन्छ, त्यसबेला हामी भन्ने गर्छौँ- “यो व्यक्ति अब रहेन ।” तर, यो सत्य होइन ।
तपाईंले जुन रूपमा त्यस व्यक्तिलाई जान्नुभएको थियो, त्यस सन्दर्भमा मात्रै ऊ त्यहाँ नभएको हो, तर उसको अस्तित्व अझै पनि त्यहीँ रहेको हुन्छ । भौतिक शरीर यहीँ छोडिन्छ, तर मानसिक शरीर र प्राण-शरीरको अस्तित्व रहिरहन्छ, जुन व्यक्तिको कर्म कति बलियो छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ । अर्को गर्भ पाउनको लागि, व्यक्तिको कर्मको संरचनाको तीव्रता कम हुनुपर्छ, यो निष्क्रिय हुनुपर्छ । यदि आफ्नो चक्र पूरा गरेको कारण कर्मको संरचना एकदमै कमजोर भएको छ भने, यसले सजिलै अर्को शरीर पाउँछ । जब व्यक्तिले यो जीवनमा आफ्नो लागि निर्धारित कर्म पूरा गर्दछ, ऊ यत्तिकै मर्नेछ— कुनै रोग, दुर्घटना वा चोटपटक बिना नै । त्यस्तो व्यक्तिले केही घण्टामै अर्को शरीर पाउन सक्दछ ।
यदि व्यक्तिले आफ्नो जीवनको चक्र पूरा गरेको छ अनि शान्तिपूर्वक मृत्यु वहन गरेको छ भने, उसलाई यहाँ रहिरहनु पर्दैन, त्यो जीवन तुरुन्तै यहाँबाट जानेछ । यद्यपि, यदि कर्मको संरचना एकदमै जटिल छ अनि कर्म पूरा भएको छैन भने, त्यो सिद्धिनुपर्ने हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा, अर्को शरीर पाउनको लागि उसलाई निकै बढी समय आवश्यक हुन्छ । यसैलाई तपाईंहरूले भूत भनिरहनु भएको हो । यिनलाई तपाईंले सजिलै अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि उनीहरूको कर्मको संरचना बढी जटिल र प्रखर हुन्छ । चारैतिर यस्ता असङ्ख्य जीवहरू हुन्छन्— चाहे तपाईंलाई यसको बारेमा थाहा होस् वा नहोस्— तर, तपाईंले अधिकांशलाई महसुस गर्नुहुन्न किनकि उनीहरूको कर्म धेरै हदसम्म सिद्धिएको हुन्छ । अर्को शरीर नपाउन्जेल उनीहरू अझ बढी सिद्धयाउन पर्खिरहेका हुन्छन् ।
Prevकछुवाको मासु खाएर एकै परिवारका ७ जना’को मृ’त्यु
Nextराेबटले पनि बच्चा जन्माउन सक्ने अमेरिकी वैज्ञानिकको दाबी
अभिनेत्री कंगनाको विषयमा सर्वोच्च अदालतले दियो यस्तो आदेश